Saaxiibadayda iyo Aniga oo ah (16 sanno jir) waxaynu is-weydiinaynaa: Goorta aan dharka iska bixinayo si aan galmo u sameeyo? – Tips for refugees
Previous Previous post: Aniga oo ah (gabar, 15 sanno jir ah) waxaa igu dhacay jacayl. Waxaan qabbaa su’aalooyin aad u baddan oo ku saabsan galmada. Ma garanayo sida aan u weydiiyo. Waalidiintaydu waxay dhahaan: Anigu uma baahni in aan oggaado waxyaabaha “sidaas oo kale ah” sababtoo ah waxaan qabaa dhibaato waxbarashada ah. Dhibaatada waxbarashada macnaheedu waxay tahay: In aan u baahanahay wakhti baddan iyo caawimaad la igu caawiyo waxyaabaha qaar. Kadibna wax kasta waan fahmayaa. Qofkee igu caawin kara su’aalahayga?